မြန်မာ့ရောင်စဉ် - သစ်ခုတ်လို့ သစ်တောပြောင်မပြောင်နှင့် ဦးတေဇအကြောင်းအနည်းငယ်
အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး အခွင့်အရေးတွေရပြီး အခွင့်ထူးခံအနေနဲ့ချွေးတစ်ပေါက်မကျပဲ ချမ်းသာသွားတဲ့သူဗျ၊ ခင်ဗျားကိုဒီလိုတွေ ရေးဖို့ ငှားထားတာလား၊ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လောက် ရလို့ဒီလိုလူအကြောင်း အကောင်းတွေရေးပြီး သူ့ ကိုကာကွယ်ပေးနေရတာလည်း" ဆိုပြီး မတ်စေ့ပို့ သွားတယ်။
ကျွန်တော်သူ့ ကိုပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ညီငယ် အစ်ကိုရေးတာက မြန်မာပြည်အနှံ့ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ မင်းတို့ ခရိုနီလို့ ခေါ်တဲ့ဦးတေဇ ရှေ့ ဆုံးကထွက်ပြီး အလှူအတန်းတွေ လုပ်နေတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူတွေကို သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီကယ်တင်ပြီး ဖေးမပေးနေတယ် ဒီအချိန်မှာ ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့ သူလှူတဲ့အလှူအတန်းတွေအတွက် သာဓုခေါ်ပေးနေရမယ့်အချိန် ဒီလိုရာသီဥတု တွေ ဖောက်ပြန်နေတာ သူကြောင့်ဆိုပြီး သာဓုမခေါ်တဲ့အပြင် ဆဲဆိုပြီး အပြစ်ပဲတင်နေကြတယ် ဒါကို အစ်ကိုမြင်လို့ ရေးလိုက်တာ၊ အစ်ကိုသာ သူ့နေရာမှာဆိုရင် ငါ့ရှာထားတဲ့ ငါ့ပိုက်ဆံတွေအကုန်ခံပြီး လှူနေတာ၊ ဒါတောင် အကောင်းမမြင်ဘူး၊ ဒီလောက်ဆဲနေရင်မလှူဘူးကွာ မလှူတော့ဘာဖြစ်လည်း လုပ်မိမလားပဲ။
အဲ့ဒီလိုဆိုရင် ငါ့ညီစဉ်းစားကြည့် ဘယ်သူတွေ နစ်နာသွားမလည်း၊ သူ့အတွက်က တတ်နိုင်လို့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ အကူအညီပေးနေတာ၊အကူအညီမပေးပဲ မသိသလိုနေလိုက်လည်းရတာပဲ၊ အဲ့ဒီလိုနေလိုက်ရင် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် အကူအညီတွေမရတော့ဘူး၊ ငါ့ညီတို့ အဲ့လိုဝေဖန်အပြစ်တင်နေတော့ရော ဘာထူးသွားလည်း၊ ဘာကောင်းကျိုးရှိလည်း ဘာမှမရှိဘူးမဟုတ်လား အရည်မရအဖတ်မရနဲ့ အားနေ ဝေဖန်အပြစ်တင်ဖို့၊ ဆဲဖို့ဆိုဖို့ပဲလုပ်နေကြတာထက် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တတ်နိုင်သလောက်လေး ကူညီပေးကြပါလားကွာ။ မင်းပြောတဲ့ ဦးတေဇအကြောင်းလည်း အစ်ကိုသိတယ်။ ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်လာတာ သစ်ထုတ်တာတွေကြောင့်လို့ပြောတဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းလည်း သိတယ် နောက်ရက် ဒီအကြောင်းတွေကို အစ်ကိုရေးပေးမယ် ငါ့ညီစောင့်ဖတ်လိုက်ပါ။ ခုချိန်မှာ ဒီလိုပြောဆိုဝေဖန် အပြစ်တင်နေတာတွေက အကျိုးမရှိဘူး၊ အကျိုးယုတ်စေတယ်ဆိုတာ ငါ့ညီတို့သိသင့်တယ်ဆိုပြီး စာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့အထိ သူ့ဆီက စာပြန်မလာတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီရေးသားထားမှုတွေက အဲ့ဒီညီငယ်နဲ့ အထင်လွဲမှားနေတဲ့သူတွေ၊ သစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိပဲ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်လာ တာ တောတွေပြောင် တောင်တွေကတုံးဖြစ်တာ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဆိုပြီး ရမ်းဖြီးနေတဲ့ သတင်းဂျာနယ် တွေ မီဒီယာတွေကို သိစေချင်တဲ့အတွက် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချို့တွေ ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ရင် သစ်တွေခုတ်ခဲ့လို့ပြောင်တာဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အသိက ဒက်ခနဲ ပေါ်လာတတ်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆို သစ်တောတွေပြောင်အောင်ခုတ်ခဲ့တာ ဦးတေဇ သူ့ကြောင့် သစ်တောတွေ မရှိတော့တာ၊ ပြောင်သွားတာ။ ဒါကြောင့် ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်တာဆိုပြီး ပြောကြတယ်၊ အပြစ်တင်ကြတယ်။
သူများတွေ အပြစ်ဘယ်လိုပဲမြင်မြင်၊ ဘယ်လိုပဲ အပြစ်တင်တင်၊ ကျွန်တော်ကတော့ အပြစ်လည်းမတင်ဘူး၊ အပြစ်လည်းမမြင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မြန်မာပြည်က အစိုးရရဲ့ သန်း ၃၀၀ ဘဏ္ဍာရေး လိုအပ်ချက်ကြောင့် သစ်တွေအဆမတန်ခုတ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းကိုသိတယ်၊ နောက်ပြီး သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းအကြောင်း ကို ကောင်းကောင်းသိတယ် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ သစ်တောတွေ ဘယ်လိုပြောင်သွားရလည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် သူ့ အပြစ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရဲရဲကြီး ပြောရဲတာ။
တစ်ချို့ တွေဆို သစ်ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိပဲ ကြားသတင်းလောက်နဲ့ရမ်းဖြီးတာတွေ မြင်ရတွေ့ ရတယ်။ ဦးတေဇကြီး သစ်တွေခိုးထုတ်ပြီးချမ်းသာနေတာ၊ ဒါကြောင့် သူ့ ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေက မသန့် ရှင်းဘူး၊ အစိုးရဆီက အခွင့်ထူးတွေရပြီး ချမ်းသာလာလို့အထင်လည်းမကြီးဘူးဆိုပြီး ပြောနေတာတွေ မြင်ရ ကြားရတယ်၊ ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီလူတွေကို တစ်ကယ်လို့များ ဦးတေဇလို အခွင့်အရေးများရခဲ့ရင် မယူပဲငြင်းလိုက်မှာလားလို့ ပါ။
ကျွန်တော်တို့ လို သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဘူးတဲ့သူတွေအတွက် ဦးတေဇဟာ ဘယ်လိုလူလည်းဆိုတာ သိသလို အများပြောနေကြတဲ့ ချွေးမထွက် သွေးမထွက်ပဲ အခန့်သားနဲ့ အစိုးရဆီက အခွင့်အရေးတွေရပြီး ချမ်းသာလာတာဆိုတဲ့စကားကို မှားနေတယ်ဆိုပြီး ထောက်ပြချင်မိတယ်။
သူဌေးကြီးဦးတေဇဆိုပြီး မဖြစ်ခင်က ကိုတေဇဆိုတဲ့လူက ပိုက်ဆံအရမ်းချမ်းသာနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ တောထုတ်စခန်း(သစ်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးဝိုင်း)ထဲမှာ သူကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းသွားရောက်ပြီး သစ်ထုတ်ဖူးသလို သစ်ထုတ်ရင်းငွေကြေးမလောက်ငှလို့အကြွေးတွေဆပ်ဖို့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ အတွက် ဟိုကချေးငှား ဒီကချေးငှား နဲ့ သူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူ အဲ့ဒီတုန်းက ထူးသစ်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုတာ သေးသေးလေး။
အစိုးရဆီက သစ်ထုတ်ခွင့်ပါမစ်တွေမရခင်က သူများတွေရထားတဲ့ ပါမစ်တွေကို လိုက်ဝယ်ပြီး သစ်စထုတ်တယ်၊ တောထုတ်စခန်းမှာ ငှက်ပျောရွက်ထဲ ထမင်းထည့်ပြီး သူတစ်လုတ် ကိုယ်တစ်လုတ်စားခဲ့တဲ့သူ၊ ဆင်ချေးတုံးတွေနဲ့ချောင်းရေကို လက်နဲ့ယက်ပြီး သောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူ၊ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်ချိန် မုန့်တစ်ခုပဲရှိရင် သူမစားပဲ သူ့လူတွေကို ကျွေးခဲ့တဲ့သူ၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ အဲ့လိုဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်၊ အဲ့ဒီလို အကြောင်းတွေကို သိနေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ ကိုတေဇဟာ နဖူးကချွေး ခြေမ မကျပဲ အစိုးရဆီက အခွင့်ထူးတွေနဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတဲ့စကားကို လက်မခံနိုင်တာအမှန်ပါ။
နောက်တစ်ခုက အစိုးရဆီက အခွင့်အရေးတွေရခဲ့လို့ သူချမ်းသာလာတာဆိုတာကို လက်ခံတယ် မှန်တယ် အစိုးရဆီက ကိုတေဇ အခွင့်အရေးတွေရခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်း သူ့ ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေရှိခဲ့လို့ ရခဲ့တာတွေ၊ အလုပ်လုပ်ရာမှာ ပြတ်သားတယ်၊ ရဲရင့်တယ် သူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း အစိုးရက သဘောကျပြီး သူ့ ကိုအခွင့်အရေးတွေ ပေးခဲ့တာ။
သူဘာတွေလုပ်ပြခဲ့လို့ အခွင့်အရေးတွေရခဲ့တာလည်း..? ဆိုရင် အစိုးရက နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရေး လိုအပ်ချက်အတွက် ပုဂ္ဂလိကတွေကို သစ်ထုတ်ခွင့်တွေချပေးချိန်၊ မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ သူခုတ် ငါခုတ် အပြိုင်ခုတ် အပြိုင်ထုတ်နေကြချိန်၊ သူများမလုပ်ရဲတဲ့ သူများမလုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို သူယူပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင် မရရတဲ့နည်းတွေနဲ့ လုပ်ပြခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီလုပ်ကွက်တွေဆိုတာက အရင်စာတွေထဲမှာ ရေးပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ အညိုရောင်နယ်မြေ အမည်းရောင်နယ်မြေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့နယ်စပ်အစွန်အဖျားတွေကိုပြောတာ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သောင်းကျန်းသူတွေကြီးစိုးရာနယ်မြေတွေ၊ အဲ့ဒီနယ်တွေက သစ်တောကြိုးဝိုင်းတွေမှာ သစ်တောဝန်ထမ်းမပြောနဲ့ရဲတွေ စစ်တပ်တွေပါ တော်ရုံအနားမကပ်ရဲဘူး။ ဒါပေမယ့် သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေရှိနေတယ် သောင်းကျန်းသူတွေနဲ့နယ်မြေထိစပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေက သစ်ခိုးထုတ်တဲ့နေတဲ့ သူတွေပေါင်းပြီး ဟိုဘက်နိုင်ငံတွေထဲကို အလျှိုလျှို ခိုးထုတ်နေခဲ့ကြတာ၊ အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော် ပြည်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတွေ လိုအပ်နေချိန်မှာ နိုင်ငံအတွက် ပိုက်ဆံတစ်ပြားတစ်ချပ်မှမရပဲ ခိုးထုတ်ခံနေရတဲ့ အဲ့ဒီသစ်တွေကို ဘယ်သူတွေ ထုတ်ပေးမလည်းဆိုပြီး သစ်ကွက်တွေချပေးခဲ့တယ် အဲ့ဒီမှာ ဘယ်သူမှမထုတ်ရဲဘူး ဒီတော့ ကိုတေဇက"ကျွန်တော် ထုတ်ပေးမယ်အဘ" ဆိုပြီး မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ သွားထုတ်ပေးခဲ့တယ်၊ ဒီတော့ အစိုးရက သူ့ ကိုသဘောကျပြီလေ။
နောက်ပြီးတော့ အစိုးရက ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်ဆိုပြီး သစ်တွေခုတ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာနေချိန်မှာ လာလျှောက်သမျှ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို အကုန်လက်ခံပြီး သစ်ထုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်၊ ဒီမှာ အစိုးရက ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှု အစွမ်းအစကိုကြည့်ပြီး သစ်လုပ်ကွက်တွေချပေးတယ်၊ ဥပမာ ဒီနှစ်အတွက် သစ်တန်ချိန် ဘယ်လောက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီး၊ အဲ့ဒီ တန်ချိန်တွေကို သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို ညီတူညီမျှခွဲဝေပြီး ပေးတယ်၊ နှစ်ကုန်လို့သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းမှာ သတ်မှတ် စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ ထုတ်မပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ တောကျန်သစ်(ခုတ်ပြီး တောထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့သစ်)တွေ အများကြီး ကျန်နေခဲ့တဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို နောက်နှစ်မှာ လုပ်ကွက်ချမပေးတော့ဘူး၊ အချိန်မှီ သတ်မှတ်တဲ့တန်ချိန်ကို သစ်ဆိပ်ကို အရောက်မပို့ နိုင်ပဲ ခုတ်ပြီး တောထဲမှာပဲထားခဲ့ရတဲ့ သူတွေပေါ့၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုတာကလည်း သူ့ရာသီနဲ့သူ လုပ်ရတာကိုးဗျ၊ သူ့ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းမှာ မသယ်နိုင်ရင် ထားခဲ့တော့ နောက်နှစ်မှ ပြန်ပြီးသယ်မှ ရတော့တယ်။
ဒီတော့ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကိုတေဇ အခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့တယ်ဆိုတာ၊ သူ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ သူ့ အစွမ်းအစတွေကြောင့် ရခဲ့တာပဲ၊ အခွင့်ထူးခံခဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူး၊ ကြိုးစားပြခဲ့လို့ ရခဲ့တာတွေ ကံကလည်းကောင်းတာပါမှာပါ၊ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင် ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ ပေါင်းစပ်ပါမှ အောင်မြင်မှုအသီး အပွင့်ကို ခံစားလို့ ရတာ၊ ဥာဏ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း၊ ၀ီရိယ ဘယ်လောက်ထားထား၊ ကံမကောင်းရင် အလကားပါ၊ သူအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာ ဒီသုံးမျိုး သူ့ဘက်မှာရှိနေလို့ အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယရှိစရာတောင် လိုမယ်မထင်ဘူး။
ဒီလောက်ဆို ကိုတေဇတစ်ယောက် နဖူးကချွေး ခြေမ မကျပဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆင်းဆင်းရဲရဲ မလုပ်ခဲ့ရပဲ ဘာကြိုးစားအားထုတ်မှုမှမရှိပဲ ချမ်းသာလာတယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေ နားလည်သဘောပေါက်သွားလောက်ပြီး ထင်ပါတယ်။
ကဲ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းအကြောင်းပြန်စလိုက်ကြရအောင်..... အားလုံးပဲသိကြမှာပါ ဂျာနယ်တွေ သတင်းစာတွေထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ လွင်ပြင်တောကြီးတွေ တောင်ကတုံးတွေဆိုတာ သစ်ခုတ်လို့ပြောင်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သစ်ခုတ်တယ် သစ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းက တောအုပ်ထဲဝင်ပြီး တွေ့ သမျှအပင် အကုန်လုံးခုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သစ်အမျိုးအစား၊ ခုတ်လို့ ရတဲ့အရွယ်အစား၊ ခုတ်ဖို့ အမှတ်အသားပေးထားတဲ့အပင်မျိုးကိုပဲ ရွေးခုတ်ရတာ၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ သစ်တွေခုတ်လို့တောပြောင်တယ်၊ တောင်ကတုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ တောင်ကတုံးတွေ ပြောင်နေတဲ့လွင်ပြင်တွေကို ပြထားတဲ့ပုံတွေကို မြင်ပြီးရင် အော်... သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုမသိပဲ ရမ်းဖြီးနေတဲ့ သူတွေပါလား၊ ဒီပုံတွေကြည့် ဒီစာတွေဖတ်ပြီး ယုံတဲ့သူတွေကလည်းယုံကြတယ်၊ ဂျာနယ်တွေ သတင်းမီဒီယာတွေကလည်း မယုံ ယုံအောင် ဖွတတ်ကြပါပေတယ်ဆိုပြီး အမြဲတမ်းပြုံးမိသလို သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲစွပ်စွဲမှုအတွက်လည်း ဒေါသထွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့လေ၊ ဒါကြောင့်မို့ လို့သစ်ထုတ်ရုံနဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ရပါဘူးလို့အတိအကျဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်။
ငွေတစ်မျက်နှာပဲကြည့်တဲ့သူ အင်မတန်မှလောဘကြီးတဲ့ စီးပွားရေးသမားပဲ ဖြစ်နေစေဦးတော့ ဘယ်တော့မှ သစ်တောပြောင်အောင် တောင်ကတုံးဖြစ်အောင် မခုတ်ပါဘူး အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် သစ်တွေ ခုတ်ပေးနေရလို့ခုတ်ချင်တဲ့အပင်ကို ခုတ်ချင်တိုင်းလည်းမခုတ်ကြရပါဘူး။ သစ်တောက တောနင်း(သစ်တောကြိုးဝိုင်းထဲလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး)ပြီးမှ ဘယ်ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဘယ်သစ်အမျိုးအစားတွေ ရှိတယ် လုံးပတ်ဘယ်လောက်ရှိတာက ဘယ်နှပင်၊ ဘယ်အပင်တွေကတော့ ခုတ်လို့ရပြီဆိုပြီး စာရင်းလုပ်၊ မှတ်ပင်ရိုက်(ခုတ်လှဲရန်အတွက်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေး)တယ်၊ ပြီးမှ သစ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေက တောထဲကိုဝင်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ မှတ်ပင်ကိုပဲ ရွေးပြီးခုတ်ရတယ်၊ ဒီတော့ အများပြောသလို တွေ့ သမျှအပင် အကုန်ခုတ်တယ် ဆိုတာ အမှားကြီးမှားတဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါလို့ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
သစ်ထုတ်တဲ့သူတွေက အစိုးရဆီကခွင့်ရလို့ နိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုပြီး ထုတ်ပေးရတဲ့သူတွေပါ၊ သူတို့ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အပင်ပဲခုတ်ပါတယ်၊ သတ်မှတ်လုံးပတ် မပြည့်ရင် ရောင်းတန်းမ၀င်လို့ မခုတ်ပါဘူး၊ စီးပွားဖြစ်မယ့်အပင်မျိုးကိုပဲ သစ်တောက ခုတ်ခိုင်းသလို သစ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပင်ကိုပဲ ခုတ်ကြရတာပါ၊ ဒီနေရာမှာ သတ်မှတ်လုံးပတ်ဆိုတာလေးကို နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်၊ ဒါကိုသိသွားရင် တောပြောင်အောင် တောင်ကတုံးဖြစ်အောင် ထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ အသိပျောက်သွားမှာပါ။
သတ်မှတ်လုံးပတ်ဆိုတာက ခုတ်မယ့်သစ်ပင်က ရောင်းတန်းဝင်သစ်ပင်ဖြစ်နေမယ် လုံးပတ်က ရင်စို့ အထက် ၅' ပေ ၆' ပေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်လုံးပတ်ပြည့်လို့ ခုတ်ယူလို့ ရပါပြီ ဒါက သစ်တောက ချမှတ် ထားတဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်မှု ဥပဒေတွေထဲက သတ်မှတ်ချက်ပါ၊ မြန်မာပြည်မှာ သစ်တောဥပဒေတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ၊ စည်းကမ်းတွေဆိုတာက ကိုလိုနီလက်ထက်က ထားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေ၊ ဒီနေ့အထိ အသုံးပြုနေဆဲပါပဲ။ သူတို့လုပ်ပေးသွားခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်တွေအတိုင်းသာဆိုရင် သစ်ထုတ်မှုတွေကို မပြတ်လုပ်သွားလို့ရပါတယ်။
သူတို့ ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်တွေ လမ်းစဉ်တွေက အရမ်းကိုကောင်းတယ်၊ သစ်ခုတ်မယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်လုံးပတ် ပြည့်မှပဲ ခုတ်ဆိုတာတွေ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို အနှစ် ၃၀ , ၄၀ , ၅၀ , ၆၀, လောက်မှသာခုတ်ပါလို့သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်၊ အနည်းဆုံး အနှစ် ၃၀ ကနေ အများဆုံး အနှစ် ၆၀ ရှိပြီဆိုမှ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ သစ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပါလို့သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်၊ လုံးပတ်ကတော့ စောစောကပြောသလို ရင်စို့ အထက် ၅' ပေ ၆'ပေရှိတဲ့( သစ်ပင်ရှေ့ မှာလူတစ်ယောက်သွားရပ်ပြီး ရင်စို့အထက်နေရာကို တိုင်းတာကြည့်လို့ သတ်မှတ်လုံးပတ် ပြည့်တဲ့အပင်)မျိုး မြန်မာပြည်က အစိုးရက အလွန်အကျွံသစ်တွေထုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ ရင်စို့ လုံးပတ် ၅ပေ ၆ပေ ကနေပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်း သတ်မှတ်ချက်က လျော့လျော့လာတယ်၊ နောက်ဆုံး ၃ ပေ ၄ ပေ အရွယ်အစားမျိုးထိပါ ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းပေါင်း ရာဂဏန်းလောက် ထုတ်နေခဲ့တာပဲ၊ စီးပွားဖြစ် ထုတ်နိုင်တဲ့ သစ်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျော့နည်းလာတော့တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ၃ ပေ ၄ ပေ အောက်ရှိတဲ့ အပင်တွေတော့ မခုတ်တော့ဘူး၊ ရောင်းတန်းလည်းမ၀င်သလို စီးပွားဖြစ်လည်း ထုတ်လို့မရတော့ဘူးလေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အတွက် မကိုက်တဲ့ သစ်ပင်မျိုးကို မခုတ်ဘူး၊ အပင်သေးသေးလေးတွေ ခုတ်ဖို့ နေနေသာသာ သစ်တောက မှတ်ပင်ပေးထားတဲ့အပင်ကိုခုတ်ရင်တောင် ဘေးမှာရှိတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပင်မဟုတ်တာကို သွားထိမိလို့ ကိုင်းကျိုးရင် အပင်လဲသွားရင် သစ်တောဥပဒေနဲ့ အရေးယူခံရတယ်၊ လျော်ကြေးပေးရတယ်၊ ဒီတော့ သစ်တောက ချမှတ်ပေးထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းပဲ ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။
သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာလည်း သစ်တောသစ်ပင်တွေကို ချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်၊ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူတို့ ကို စီးပွားဖြစ်စေတာ ဒီသစ်တောတွေ ဒီသစ်ပင်တွေကြောင့်ပါ၊ ဒါကြောင့် သစ်တောတွေပြောင် တောင်တွေကတုံးဖြစ်တာမျိုး သူတို့မမြင်ချင်ကြ မဖြစ်စေချင်ကြပါဘူး။ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးအောင် သူတို့ မလုပ်ကြပါဘူး၊ သစ်တောသစ်ပင်တွေ တောတောင်တွေရှိနေသမျှ သူတို့ အတွက် စီးပွားဖြစ်နေစေလို့ ပါပဲ။
ဒါဆိုရင် သစ်တောတွေ ဘာလို့ ပြောင်ကုန်လည်းဆိုတော့ အကြောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ သစ်ခိုးခုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် သစ်တောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုတာ မရှိတော့ဘူး၊ ခုတ်ချင်တဲ့အပင်ကို ခုတ်ချင်သလို ခုတ်ပြီးတော့ယူတယ်၊ သစ်လည်း မရွေးဘူး၊ တွေသမျှ အကုန်ခုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်စီးပွားမဖြစ်တဲ့ သစ်ပင်မျိုးတွေ အပင်သေးတွေတော့ ခုတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ချန်ခဲ့မှာပဲ၊ သစ်တောပြုန်းလောက်တဲ့အထိတော့ မခုတ်ဘူး၊ အပင်နည်းသွားတာမျိုးလောက်ထိပဲ ရှိမယ်၊ သူတို့ ကြောင့်ချည်းပဲလဲ သစ်တောမပြောင်ဘူး၊ တောင်ကတုံးမဖြစ်ဘူး။ တောင်ယာလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်၊ တောင်ယာလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အပင်ကြီး အပင်လေး မရွေးဘူး၊ ခုတ်လို့ ရတာခုတ်တယ်၊ ခုတ်လို့ မရရင် မီးရှို့ တယ်၊ အဲ့ဒီလို မီးရှို့ မှလည်း တောင်ယာလုပ်ဖို့ အတွက် မြေနေရာနဲ့မြေဆီလွှာရတယ်၊ သူတို့ က တစ်နေရာထဲမှာ အမြဲတမ်းတောင်ယာလုပ်တာလားဆိုတော့ မလုပ်ဘူး၊ ရွေ့ ပြောင်းတောင်ယာဆိုတာ ကြားဖူးမှာပေါ့၊ တစ်နေရာပြီးတော့ တစ်နေရာကို ရွေ့ပြောင်းပြီး တောင်ယာလုပ်ကြတယ်၊ သူတို့ တောင်ယာလုပ်ထားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ အပင်ကြီးမရှိတော့ဘူး၊ ကွက်လပ်ကြီးဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်၊ အပင်တွေ ပြန်ပေါက်ဖို့အပင်ကြီးတွေ ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အချိန်အတော်လေး ပြန်ကြာမှပဲ ဖြစ်နိုင်မယ်။
မီးသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေ စီးပွားဖြစ် မီးသွေးထုတ်တာကလည်း သစ်တောသစ်ပင်တွေ လျော့နည်းလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာပါတယ်၊ ကိုင်းဖျားကိုင်းနားတွေလည်းမချန် အပင်ကြီးအပင်လေးလည်းမရွေး မီးသွေးဖုတ်ချင်တဲ့ အပင်ကို ဖုတ်တယ်၊ စီးပွားဖြစ်လုပ်တော့ အပင်ပေါင်းများစွာ မီးသွေးအဖြစ် ပြောင်းသွားတော့တာပေါ့၊ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး၊ သူတို့ ကြောင့်လည်း တောမီးတွေလောင်ပြီး တောပြောင် တောင်ဂတုံး ဖြစ်သွားစေတယ်။
တောမီးလောင်တယ်ဆိုတာကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ၊ သဘာဝကြောင့် လောင်တာတွေရှိသလို လူတွေရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် လောင်တာတွေရှိတယ်၊ နောက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရှို့ တဲ့မီးတွေကြောင့်လည်း တောပြောင်တာတွေ တောင်ကတုံးဖြစ်တာတွေ ဖြစ်စေတယ်။
စီမံကိန်းတွေကြောင့်လည်း တောပြောင် တောင်ကတုံးတွေဖြစ်စေပါတယ်၊ သတ္ထုတူးဖော်ရေး၊ ဆည်တာတမံတွေ တည်ဆောက်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမြေကွက်ဖော်ဆောင်ရေး၊ မြို့ ပြဖော်ဆောင်မှုတွေကလည်း သစ်တော သစ်ပင်တွေ လျော့နည်းလာရခြင်း အကြောင်းရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်၊ သတ္ထုတူးဖော်ရေးတွေ မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတလုပ်ကွက်တွေကို မြင်ဖူးရင်သိကြမှာပါ၊ သစ်ပင်တွေ သစ်တောတွေကို ဘယ်လို ရှင်းထုတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ ဆည်တွေကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ရေ၀ပ်ဧရိယာမှာရှိတဲ့ သစ်ပင်တွေကို အပြောင်ရှင်း( အပင်ကြီးအပင်သေး ဘာမှမကျန်အောင်ခုတ်တဲ့)စနစ်နဲ့ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပစ်ပြီးမှ ဆည်တွေကိုဆောက်ကြရတာပါ၊ စိုက်ပျိုးမြေကွက်တွေ လူနေအဆောက်အဦးတွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် အရင်ဆုံး ကွင်းပြင်ကြီးတွေဖြစ်အောင် အပင်ကြီးအပင်သေး ဘာမှမကျန်အောင် ခုတ်ထွင်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးဖို့မြေနေရာအဖြစ် လူနေအိမ်တွေတည်ဆောက်ဖို့မြေနေရာအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ကြတာပါ၊ ဒါကလည်း သစ်တောတွေ သစ်ပင်တွေ ပြုန်းတီးလာရခြင်းအကြောင်းရင်း တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် သစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ရုံနဲ့ သစ်တောတွေ ပြောင်တယ် မပြောင်ဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသွားလောက်ကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်၊ နောက်မှ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကို ရေးပေးပါဦးမယ်၊ သစ်တစ်ပင်ခုတ်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲ၊ အဆင့်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ် ဘယ်လိုစည်းကမ်းတွေ နည်းလမ်းတွေနဲ့ခုတ်ရတယ်ဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးပါဦးမယ်၊ သစ်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် သစ်တောတွေပြောင် တောင်တွေ ကတုံးဖြစ်တယ်၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့် ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်နေတာဆိုပြီး ဘုမသိဘမသိနဲ့ ပြောချင်ရာပြောနေကြတဲ့ ရမ်းဖြီးတွေ ပပျောက်စေချင်လို့ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ရေးပေးလိုက်တာပါ နားပါဦးမယ်။
Credit to: မြန်မာ့သစ်တောနှင့်သစ်ခုတ်သည့်အကြောင်းများ-Myanmar Timber
More in this category: « ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း သစ်တော သစ်ပင်တွေ ပြုန်းတီးရခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံဘယ်သူလဲ..?	အဆင်ပြေပါစေကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်း »
You are here: HomeArticlesသစ်ခုတ်လို့ သစ်တောပြောင်မပြောင်နှင့် ဦးတေဇအကြောင်းအနည်းငယ်